Onneef Lolanii Humnaaf Dadhabuun Mohatamaa Nama Hin Gootu! -
Onneef Lolanii Humnaaf Dadhabuun Mohatamaa Nama Hin Gootu!
Qixxeessaa Lammii | Muddee 18, 2017
Ummata gabrummaan bara dheeraaf cafaqee jaanjesse irra ilaaluun hin barbaachisu. Oromoon waggaa 150 ol gabrummaa Habashootaa jala jira. Lola diddaa gabrummaa fi fincila gabrummaa godhe keessatti fira isaaf dirmate hin argatne. Ibiddaan booji’amee ibiddaan bulfamaa jira. Biyyaa fi namooma erga dhabee guyyaan falmaa irraa dhaabbate garuu hin jiru. Onnee duwwaan ibiddaan falmaa ture. Goonni moohataan ibidda ta’ee dabeessi moohamaan isa ibidda hin qabne harka qullaa lolate ta’ee hanga ammaa gabrummaa jala jira.
Namni nama ta’ee nama harka duwwaa ibiddaan falmu irratti humnaan bulchuuf yaalu nama sammuu hin qabne. Goota du’a hin sodaatne ajjeesuu akka hin sodaate silaa beekee humnaan dirqisiisee bulchuuf hin carraaqu ture. Mootummootni Habashaa kan amma aangoo irra jiru dabalatee yeroon isaan ummataan jaalatamanii biyyattii itti bitan hin jiru. Humnaan barcumaa qabatanii malaan ummata bulchuu yaalan. Ummata sobaan bulchuun hammuma itti hin baramin waan ta’eef gaafa sobni irratti dhaqabame ibiddaan bulchutti taakkan ykn tarkaanfatan.
Gadaa kana keessa kan hedduu nama dhibe ummata miiliyoona dhibbaa olii ummatni miiliyoona sadi hin caalle dhiittee bulchuu isiiti. Keessummaan keessa nama hin beekne uttee ibidda irra kaahuu eegdi akkuma jedhamu kan ummata dila kana dhiitee bulchaa jiru humna namaa osoo hin taane ibidda faranjootaa akka ta’e hubachuu dhabuudha. Maqaan har’a mootummaan Tigree ittiin leetu hooda jabeesitoota amantaa isilaamaa akka hin babal’atne ittifna jechuudhaan gargaarsa Ameerikaa, biyyoota Awroopaa fi Chaayinaa irraa argattuun ummattoota addatti ummata Oromoo ittiin gabroomfata jirti.
Kanaaf, kan qabeenya biyyaa saamuu fi dhala namaa ajjeessuuf hayyama guutuu biyyoota guddatan kana irraa qabdu isii qofa. Ajjeechaa dabalatee ajjeechaa gadittis roorroo bifa hundaa ummata irratti raawwachuuf mirga guutuu qabdi. Keessumaa addatti mootummaa USAn eebbifamuu irraa waaqaa olitti of bikkite jirti. Farda ganama koorsan galgala kooraa jala baatan akkuma jedhamu dhaaba shiftaa kana kan of irratti koorse ummattoota biyyatiiti. TPLF nuuf qabsooftee gabrummaa Dargii jalaa nu baafte jechuudhaan jalatti hiriiranii kabajaa ol aanaan mataa irratti osoo of baasuu baatanii har’a galatni du’a hin ta’u ture. Waan dabre irraa barachuu dhabuun bakka dhaabbatanitti deemuudha. Gabrummaa keessaa bahanii gabrummaa biraatti seenuuf warraaqsi geggeefame seenaa warraaqsa ummattoota addunyaan deemsifaman keessatti hin mul’atne. Ibidda keessa dhaabbatanii ibidda keessa deemuun jijirama hin qabu. keessa dhaabbatanii keessa deemanii gubatuun gumatuma waan ta’eef faaydaan irraa argamu hin jiru.
Akkasuma dhaabbileen isiin tolfamanillee wadala harree kan waraabessa niitii isaa irraa baasuu hin dandeenye ta’an. Dhaddee ilmoo dhalte sababa qoree qabduuf oota irraa arraabuu dadhabdee arraabuuf qoree dhiisuuf dhalee eebada garaa haadha dhaltee jette sanaa OPDOn waramaxa seente ummata isiis waramaxatti naqxee cincesisiisaa jirti. Gaafatama seenaa kana jalaa of baasuuf goota warraaqaa taate gadi baatee ummata isii waliin ibidda seenuu qabdi. Wayyaanee fi Oromoo wal bira jaalchuu dhiisuu qabdi. Wayyaanee ykn Oromoo filattee gara tokkotti qulqullaahuu isii barbaachisa.
Ummattootni biyyattii addatti ummatni Oromoo fi ummatni Amaaraa mootummaa kana dura dhaabbachuu irraa hin sokeenne. Onneef lolanii humnaaf human ibiddaaf dadhaban moohamanii miti. Ragaan kanaa harka duwwaa ibidda dura dhaabbatanii Agaazazii isiin gabbiftee itti gadi dhiifteen wal dhaansoo du’aa fi jiruu qabuudha. keessumaa ummatni Oromoo yaaddoo guddaa itti ta’ee jira. Ummata sodaa du’aa injifate har’as dirqamaan bulchuuf eebjochuun isii ummata isii irratti boba’aa raphuun ibidda irra buusuu akka ta’e kan hubatte hin fakkkatu. OPDOn galaana warraaqsa ummataa dura dhaabbachuu sodaattee ummata duratti baatee ummata shelachuuf jecha gooftaan keenya ummata bal’aa keenya jechaa baate har’a chi buuteen isii miha sareen fuute ykn dhadhaa ibidda bu’e taatee jirti.
Ummata bal’aaf falmuun ummata biratti dhuma ittisuudhaan bakka isaanii ba’anii hadhaa du’aa sana dhandhamuu danda’uudha. Kan nama ajjeesee fi qabeenya balleesse seeraan itti haa gaafatamu jechuudhaan afaan duwwaan miidiyaalee hawaasaa irratti bahanii lallabaa ooluu fi buluun ummata Oromoo du’a irraa hambisaa hin jiru. Erga warraaqsi mormii mootummaa irratti jalqabamee as ummata Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti waraana Agaazazii Wayyaaneetiin lubbuu dhabeef kan seeraan gaafatame hin jiru. Liyyuu hayliin Poolisii Somaalee ummata keenya lafa irraa hobbaafte tan seeraaf dhihaatte hanga ammaa hin jirtu. Kan yakka hiriyyaan hin qabne ummata bal’aa Oromoo irratti raarrate namni 5 qabamee ummatni yakki irratti raawwatame namni 98 qabamee hidhamee hidhaa jira jechuun labsuun OPDO waan saba qaannesse. Reeffa Oromoo jiraa Somaalee waliin hidhanii seeraaf dhihessuuf yaa’an jechuudha.
Kan nama raaju dhihoo kana maqaaf magaalaa Shaashammannee fi magaalaa Awadaayitti warra nama ajjeesan jechuun warri qabamanii murtiin itti laatame jedhamee midiyaadhaan odeeffame har’a mana hidhaa osoo hin taane hoteelota bashannanaa keessa jiru.
OPDOn oowwa warraaqsaatiin bokoktee gooftaan keenya ummata bal’aadha jechaa turte har’a gooftaan keessan nuhi, gaaftaan keenya TPLF jechaa jirti. Kanaaf ragaan Oromiyaa guutuu keessatti yeroo ammaa kan humna Agaazazii Wayyaanee barattoota, dargaggoota, hayyootaa fi warraaqxotatti waamee hiisisiisaa fi ficcisiisaa jiru miseensota OPDO warra Tigreen aangoo raabsiteef irra jiraniidha. Booranatti barattoota hiisiisuu fi ajjeesisuu irratti, Baaletti Qeerroo akka Qeerroo Ambootti hin dhaqne dhoorgisiisuu irratti, Wallagatti hamma naafa Oromoo qabsiisuun maa’ikalaawitti hiisisiisuu, Harargetti ummatatti Agaazazii waamuun ficcisiisuu fi kkf hunda kan raawwachiisee fi raawwate miseensota OPDO Tigreen xiqqeeffatte.
Bu’aan OPDOn ummata Oromoof hanga ammaa argamsiifte yoo jiraate kaaseta warraaqsaa gadi dhiisuu, weellistoota akka barbaadanitti akka weellisanii fi dubbatan hayyamuu, midiyaan isaanii waan barbaade dabarsuu danda’uu, aangawootni OPDO waan fedhan haasawuu danda’uudha. Sombi waan sareen soban akkuma jedhame afaaniin waan barbaadan akka dubbatan hayyamuun ummata Oromoo irraa dhumaatii hin hambiftne. Sirba warraaqsaa fi mootummaa arrabsuu hayyamuun onnee ummata Oromoo gadi fageenyaan hubatanii mala itti dhahachuuf yeroo bitachuuf xurubaa afuufsisiisan malee gaaffii Oromoof deebii dhugaa deebisuufiif miti.
Tooftaan wayyaaneen OPDO ummatatti bobbaafteef akka warraaqsa irraa hayyiftuuf ture. Bobbaa kana irraa bu’aan argame dhala Oromoo dacha dachaadhaan akka wareegamu gochuudha. Jaarsi du’uuf deemu si hin abaarin! Galaanni taru si hin nyaatin akkuma jedhamu mootummaa gaggabdee du’aaf dhiitattu ummata keenya ficisiisuun gaafatama seenaa dachaa jalaa isaan hin baasu waan ta’eef reeffa Oromoo guyya guyyaan bakka maratti isiin haamamee tuulamu kana cal’iftee ilaaluu osoo hin taane gumaa lubbuun baasuu qabdi. Ummatni Oromoo goota onneef lolee ibiddaaf dadhabe waan ta’eef ummata onneen moohatee ibiddaaf dadhabe ibidda horachiisuu qabdi.
Gabaabatti warraaqsa oowwe oowwifachuu qofa osoo hin taane ABO, WBO, Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi dhaabbilee Oromoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoof qabsaawan cufa waliin hariiroo Oromummaa uummattee warraaqsa oowwisuu qofa osoo hin taane bobeessuun hidda gabrummaa Tigreen ummata keenya irratti dagaagsite ciruu qabdi.
Kan lolate ni moohata!
TPLF/Ethiopia regime’s military is committing war crime by killing Oromo and looting their properties!
Oduu Oromia Adda Addaa, Kiibxata, Muddee 19, 2017
1 thought on “Onneef Lolanii Humnaaf Dadhabuun Mohatamaa Nama Hin Gootu!”
Oromo Hunde. says:
Yaa ilman Oromoo, qoda sera Oromia kessaat
Loltuu kegna gara lolitu biyyatti olli maaffi hingudifne? hidhanoosi muxano kanqaabuffi
deena kegnas kani haraka kenachisu humina cima daaburati dhokissan ijjara.